Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Dalka Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Dalka Kenya
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Dalka Kenya
Nairobi-(SONNA)-Golaha Dowladda dhexe u qaabilsan warbaahinta Kenya ee (MCK) ayaa ku baaqay in meesha laga saaro tabinta tooska ah ee shirarka jaraa’id oo uu tilmaamay kuwo xasaasi ah xilligaan.
Ku simaha madaxa fulinta ee Golaha MCK CEO David Omwoyo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in warbaahinta laga doonayo inay diiradda saarto waxyaabaha ku soo kordhaya howlaha doorashada ku celiska ah.
Dhanka kale Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Dalka Kenya IEBC Mr Wafula Chebukati ayaa sheegay in 50-degaan Baarlamaaneed laga codeeyay waloow 5,319 oo ah goobaha codbixinta anan laga soo gudbinin wax farriin ah, taasi oo uu ku micneeyay inaysan codeyn ka dhicin ama ay saameysay cillad dhanka khadka ah.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in arrimo dhowr ah laga baaraandegay ka hor inta anan la shaacinin in doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ay maalinta sabtida ka dhaceyso ismaamulada kala ah Kisumu, Migori, Homa Bay iyo Siaya oo shalay laga soo tabiyay caqabado dhanka amaaanka ah.
Waxaa uu intaasi ku daray in haddii ay dibadbaxyada sii socdaan guddiga doorashooyinka uu qaadanayo go’aan la xariira maamul goboleedyadaasi iyo natiijada doorashooyinka.
Natiijada hor dhaca ah ayaa muujinaysa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku hogaaminayo codadkii la dhiibtay 442,052 oo cod, halka Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka Nasa uu helay 6, 321 cod.
Raila Odinga, oo horay u shaaciyay inuu is bahaysigiisu qaaddacay doorashooyinka haddana loollanka loo adeegsanayo Magaciisa iyo Sawirradiisa.
Saaka oo Jimca ahna waxaa lasoo sheegayaa iney sii lixaadsanayaan rabshadaha ka socda goobaha ay mucaaradku ku xooggan yihiin halkaasi oo sida ay Boliisku sheegeen lagu dilay Afar Qof, halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen
Previous articleMadaxweyne Waare Oo Xalay Meel Fagaaro ah Kula Hadlay Bulshada Degmada Warsheekh+(Sawiro)
Next articleWasiir Isloow oo Ankara kula kulmay Wasiirka Arimaha Gudaha Turkiga